हङ्कङबाट बिप्रेषण भित्र्याउन सनराइज बैंक र एटी सर्भिसबीच सम्झौता - Lokpath Lokpath
२०७७, १६ श्रावण शुक्रबार २०:३८
हङ्कङबाट बिप्रेषण भित्र्याउन सनराइज बैंक र एटी सर्भिसबीच सम्झौता
प्रकाशित मिति : २०७७, १६ श्रावण शुक्रबार २०:३८
काठमाडौं । सनराइज बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट हङ्कङबाट बिप्रेषण भित्र्याउने भएको छ । अनलाइन प्रणालीबाट एकाध मिनेटमा नै बिप्रेषण सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ बैंक र हङ्कङको एटी सर्भिसबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापछि र हङ्कङमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेका आफन्त तथा इष्टमित्रलाई पैसा पठाउन अझ सरल र सुलभ हुने आशा बैंकले अपेक्षा गरेको छ । यसरी पैसा पठाउँदा तुलनात्मकरुपमा उच्च विनिमय दरमा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हङ्कङबाट नेपालमा पठाएको पैसा केही मिनेटमै सनराइज बैंकका देशभर रहेका १३४ शाखा र १० वटा विस्तारित काउन्टर तथा बैंकका देशभरि छरिएका १० हजार बढी एजेन्ट सञ्जालमार्फत सजिलै नगद भुक्तानी लिन सकिनेछ ।
बैंक खातावालाको हकमा भने, यो सेवा सनराइज बैंकको खातामा मात्र सीमित नभई देशका अरु विभिन्न वाणिज्य र विकास बैंकको खातामा समेत तुरुन्तै रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । बैंकको विस्तारित सेवाबाट नेपालमा वैधानिक तवरले विप्रेषण रकम भित्रिनेमा बैंक विश्वस्त रहेको आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ९९ हजार ८०० पुग्दै नयाँ
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले बजारको माग र चाहनाबमोजिम नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा
साताको दोस्रो दिन आज के भयो शेयर बजारमा ?
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन उच्च अङ्कको गिरावट आएको धितोपत्र बजारमा आज भने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ